Apple က iOS3beta 11.2, tvOS 11.2 နှင့် watchOS 4.2 ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple က iOS3beta 11.2, tvOS 11.2 နှင့် developer များအတွက် watchOS 4.2 တို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Apple ကပဲစတင်လိုက်တယ် iOS 11.2 ၏တတိယ beta version၊ တီဗီ 11.2 နှင့် developer များအတွက် watchOS 4.2။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် developer များအတွက် beta ဗားရှင်းအားလုံးကိုတနင်္လာနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်။
BatOS တွင် tvOS2နှင့် watchOS3ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိပုံမပေါ်သကဲ့သို့၎င်းသည်ယခင် iOS version ၏ယခင် beta 11.2 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအပြောင်းအလဲများစွာမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ နောင်လာမည့်နာရီများ၌၎င်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကျစွာရှင်းပြပါ။ အရေးကြီးသည့်သတင်းဖြစ်လျှင်၎င်းကိုဤဆောင်းပါး၌ပင်ထပ်ထည့်ပါလိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းလိုပဲပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့တိုးတက်မှုများထည့်သွင်းထားသော operating system အတွက်အတွင်းပိုင်းတိုးတက်မှုများပါသောဗားရှင်းရှိသည်။ ယခင်မူကွဲများ၏အမှားအယွင်းများနှင့်ဖြေရှင်းချက်အမှားပြင်ဆင်ခြင်း, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတွင်းပိုင်းလည်ပတ်မှုနှင့်အသုံးပြုသူအတွက်အမြင်အာရုံအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲများကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ developer များအတွက်ဤဗားရှင်းအသစ်များသည်အရာခပ်သိမ်းတွင်အရေးကြီးသော်လည်းအရေးကြီးသည့်အမှားအယွင်းများသည်အမြင်အဆင့်တွင်မရောက်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းစနစ်၏လည်ပတ်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။
iOS2၏ beta 11.2 ဗားရှင်းတွင် Apple Pay Cash သည် iMessage မှအလုပ်လုပ်သောအသုံးပြုသူများနှင့် wallpapers အသစ်တို့အကြားငွေပေးချေမှုစနစ်၏အသစ်အဆန်းဖြစ်လာသည်။ ဤသည်အသစ်အဆန်းကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့အဖော်ပြထားခြင်းပြီးသွားအပြင်ပိုလန်ခံရဖို့အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ရှိနိုင်ပါသည် လက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
Apple Watch သည် ၄ ​​င်း၏ betOS3၏ watchOS 4.2၊ tvOS 11.2 နှင့် macOS 10.13.2 တို့အတွက် developer များအတွက်တတိယ beta ကိုလည်းရရှိသည်။ လာမယ့်နာရီအနည်းငယ်မှာထင်ရှားတဲ့ကျရှုံးမှုတွေမရှိရင်အရာအားလုံးပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် iOS 11.2, tvOS နှင့် macOS public beta ဗားရှင်းများကိုရနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple က iOS3beta 11.2, tvOS 11.2 နှင့် developer များအတွက် watchOS 4.2 တို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ သတင်းများ၊ အပြောင်းအလဲများသို့မဟုတ်အမှားဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်သိပါသလား
အက်ပဲရဲ့တိုးချဲ့ပြန်လာတဲ့အစီအစဉ်နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်မှာထွက်
တက္ကဆက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောလူသတ်မှုကျူးလွန်သူ၏ iPhone ကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းသည် FBI မှအကြီးအကျယ်မှားယွင်းနိုင်သည်